Anodzidzisa Ari Munzira Kuenda kuJerusarema | Upenyu hwaJesu
Anodzidzisa Ari Munzira Kuenda kuJerusarema
MATEU 8:19-22 RUKA 9:51-62 JOHANI 7:2-10
VANUN’UNA VAJESU VANOMUONA SEI?
BASA ROUMAMBO RINOKOSHA ZVAKADINI?
Jesu ava nenguva achinyanya kuparidzira muGarireya, nokuti ndimo maari kuwana vanhu vanoteerera kupfuura muJudhiya. Chimwe chiri kuita kuti adaro ndechokuti paakaporesa mumwe murume muJerusarema paSabata, “vaJudha vakatanga kutsvaka zvakatonyanya kumuuraya.”—Johani 5:18; 7:1.
Wava mwedzi wechinomwe mugore ra32 C.E., uye Mutambo Wematebhenekeri [kana kuti Wematumba] wava pedyo. Mutambo uyu unopembererwa kwemazuva manomwe, wozoteverwa nemutambo mukuru pazuva rechisere. Mutambo uyu unoitwa somucherechedzo wekuguma kwemwaka wevaJudha wekurima saka inguva yemakuwerere neyekutenda.
Vanun’una vaJesu vanoti Jakobho, Simoni, Josefa naJudhasi vanomuudza kuti: ‘Enda kuJudhiya.’ Jerusarema ndiwo muzinda wekunamata munyika yacho. Guta iri rinenge rakati maku nevanhu panoitwa mitambo mitatu yepagore. Vanun’una vaJesu vanoratidza chavari kudira kuti aende pavanoti: “Hapana munhu anoita chinhu pachivande asi iye achitsvaka kuzivikanwa pachena. Kana uchiita zvinhu izvi, zviratidze pachena kunyika.”—Johani 7:3, 4.
Nyaya iripo ndeyekuti vanun’una vake vana ava ‘havasi kutenda’ kuti ndiye Mesiya. Asi vari kuda kuti vanhu vakaungana pamutambo wacho vaone zvishamiso zvake. Achiziva zvaigona kuzoitika, Jesu anovaudza kuti: “Nyika haina chikonzero chokukuvengai, asi inondivenga, nokuti ndinopupura pamusoro payo kuti mabasa ayo akaipa. Imi kwirai kumutambo; ini handisati ndava kukwira kumutambo uyu, nokuti nguva yangu yakakodzera haisati yanyatsosvika.”—Johani 7:5-8.
Pashure pemazuva vanun’una vaJesu vaenda pamwe chete neboka revanhu vaienda kumutambo uyu, Jesu nevadzidzi vake vanozoteverawo pachivande. Vanoenda nenzira iri pedyo yekuSamariya vachisiya inotenderera inowanzoshandiswa nevakawanda iri pedyo neRwizi rwaJodhani. Jesu nevadzidzi vake vachazoda pokugara muSamariya saka anotuma nhume kuti dzinovatsvakira pokugara. Pane mumwe musha, vanhu vanoramba kuvapa pokugara kana kuvaitira tsika dzokugamuchira vaeni nekuti Jesu akananga kuJerusarema kumutambo wevaJudha. Jakobho naJohani vanoshatiriswa nazvo vobva vabvunza kuti: “Ishe, munoda here kuti tiudze moto uburuke kubva kudenga uvaparadze?” (Ruka 9:54) Jesu anovatsiurira muromo iwoyo, vobva vaenderera nerwendo rwavo.
Vari munzira, mumwe munyori anoti kuna Jesu: “Mudzidzisi, ndichakuteverai kwose kwamave kuda kuenda.” Jesu anopindura kuti: “Makava ane maguru uye shiri dzokudenga dzine pokugara, asi Mwanakomana womunhu haana pokuisa musoro wake.” (Mateu 8:19, 20) Ari kuratidza kuti munyori uyu achazosangana nematambudziko kana akava muteveri waJesu. Asi nekuzvikudza kwaanoita, munyori uyu anoramba upenyu hwakadai. Saka mumwe nemumwe wedu anogona kuzvibvunza kuti, ‘Chido changu chokutevera Jesu chakasimba zvakadini?’
Jesu anoti kune mumwe murume: “Iva muteveri wangu.” Murume wacho anopindura kuti: “Ndibvumirei kuti nditange ndaenda kunoviga baba vangu.” Achiziva zviri kurehwa nemurume wacho, Jesu anomuudza kuti: “Rega vakafa vavige vakafa vavo, asi iwe enda unozivisa umambo hwaMwari kwose kwose.” (Ruka 9:59, 60) Zviri pachena kuti baba vacho havasati vafa. Dai vafa, pamwe mwanakomana wacho angadai asiri ipapo achitaura naJesu. Mwanakomana uyu haana kugadzirira kuisa Umambo hwaMwari pakutanga muupenyu hwake.
Vari mumugwagwa kudaro vakananga kuJerusarema, mumwe murume anoudza Jesu kuti: “Ishe, ndichakuteverai; asi ndibvumirei kuti nditange ndanooneka vaya veimba yangu.” Jesu anomupindura kuti: “Hapana munhu anoti kana abata gejo otarira zvinhu zviri shure akanyatsokodzerwa noumambo hwaMwari.”—Ruka 9:61, 62.
Vaya vanoda kuva vadzidzi vaJesu vechokwadi vanofanira kuramba vakaisa ziso ravo pabasa roUmambo. Kana munhu ari kurima akasaramba akatarira mberi, muforo unogona kutsveyama. Kana akambosiya gejo kuti atarire zviri kumashure, basa rinenge radzokera kumashure. Ndizvo zvazvakaitawo nemunhu anocheuka achitarisa zvinhu zviri munyika ino iri kupfuura. Anogona kupiringishwa akabuda munzira inoenda kuupenyu husingaperi.
Vanun’una vaJesu vana vanomuona sei?
Nei vaSamariya vachiramba kugamuchira Jesu, uye Jakobho naJohani vanoda kuitei?
Jesu anokurukurei nevanhu vatatu mumugwagwa, uye anonyanya kusimbisei nezvokushumira Mwari?
Jesu Aiva Akaroora Here? Aiva Nevakoma, Vanun’una Nehanzvadzi Here?
Sezvo Bhaibheri risina zvarinotaura nezvokuroora kana kusaroora kwaJesu, tingaziva sei chokwadi nezvenyaya iyi?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Anodzidzisa Ari Munzira Kuenda kuJerusarema